1.ဒီတောင့်အခြောက်ခံစက်ကိုဓာတုဗေဒတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, အစားအစာ, ဆေးဝါး, ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ, အီလက်ထရောနစ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ခြောက်သွေ့သော granular ပစ္စည်းများနှင့်လုံးလေးများကိုအထူးသက်ဆိုင်.
ထံမှနောက်ဆုံးလုံးလေးများ ငါးအစာကျွေးခြင်း extruder ဒါမှမဟုတ် ပြားချပ်ချပ်သေလုံးလေးကြိတ် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်စိုစွတ်ကြ၏, ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုချက်ချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်။ သိမ်းဆည်း။ မရပါ. Mesh Belt Pellet dryer Machine သည်လုံးလေးထုတ်လုပ်မှုတွင်ထုတ်လုပ်သောအတောင့်အစိုဓာတ်နှင့်အပူကိုဖယ်ရှားရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစက်ဖြစ်သည်. လုံးတောင့်ခြောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်: ကုန်ကြမ်းများကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိပူသောလေနှင့်အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်၍ ပါ ၀ င်သောရွေ့လျားမှုနှင့်အတူသယ်ဆောင်သည့်ခါးပတ်ပေါ်တွင်ခြောက်သွေ့စေရန်. ယူနီဖောင်းလုံးလေးများခြောက်သွေ့, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ထူးခြားသောလေကြောင်းခွဲဝေကိရိယာ, သင်၏ခြောက်သွေ့မှုလိုအပ်ချက်အတွက် mesh belt dryer စက်ကိုမော်ဒယ်သုံးမျိုးဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်!
အစာတောင့်အခြောက်ခံစက်ကိုအများအားဖြင့်အစာတောင့်တောင့်နှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည် အစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၌တည်၏. ငါးအစာတောင့်သည်ငါးအစာထုတ်စက်မှသည်အတောင့်အခြောက်ခံစက်သို့သယ်ဆောင်သည်, ထို့နောက်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွက်ခါးပတ်ပေါ်တွင်သယ်ဆောင်သွားသည်. ကွက်ခါးပတ်၏ပြော, ၎င်းသည်အလွှာပေါင်းများစွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းနှင့်ရွေ့ပြောင်းနိုင်သည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြောက်သွေ့ခြောက်အောင်မြန်စေတယ် & မြင့်မားသော - ထိရောက်မှု, ဒါကြောင့်လေမှုတ်စက်ကို Mesh-belt Type Pellet Feed Dryer လို့လည်းခေါ်တယ်. ဒီတောင့်အခြောက်ခံစက်ကိုဓာတုဗေဒတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, အစားအစာ, ဆေးဝါး, ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ, အီလက်ထရောနစ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ခြောက်သွေ့သော granular ပစ္စည်းများနှင့်လုံးလေးများကိုအထူးသက်ဆိုင်.
Feed Pellet Dryer Machine လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း
စက်၏ ဦး ခေါင်း
အစာတောင့်ခြောက်သွေ့စက်၏ ဦး ခေါင်းကိုမောင်းနှင်သော roller နှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, တင်းကြပ်စွာ, ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်အစာကျွေး.
Passive bearing သည်တင်းမာမှုနှင့် mesh belt ၏တင်းကျပ်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်, ဒါကြောင့် passive roller နှစ်ခုစလုံးစွန်းမှာရှိတဲ့ဝက်ဝံတွေကိုအပူချိန်မြင့်မြင့်နဲ့မှန်မှန်ချောဆီချသင့်တယ် (200 အထက်) အမဲဆီချော, feed ကို pellet dryer ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသေချာစေရန်.
တင်းသည်ကွက်ခါးပတ်တင်းကျပ်စွာညှိရန်ဖြစ်သည်. ပထမ ဦး ဆုံးတပ်ဆင်, ကွက်ခါးပတ်တင်းကျပ်ရပါမည်, နှင့်တက်အပူပြီးနောက်, နောက်တဖန်တင်းကျပ် (ဘာလို့လဲဆိုတော့အပူတိုးချဲ့၏).
ဤအဆင့်သည်ပစ္စည်းခြောက်သွေ့ခြင်း၏အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောနေရာဖြစ်သည်, ထိပ်ပေါ်မှာ install လုပ်နေတာပေါက်ကွဲမှုပိုက်နှင့်ရိနာစွဲပိုက်. နှစ်ဖက်စလုံးမှအတွင်းပိုင်းအခန်း၏အောက်ပိုင်းသို့လေကောင်းလေ ၀ င်သည်, ထို့နောက်အလယ်ကနေလေတိုက်တာဘိုင်အားဖြင့်ထုတ်ထုတ်ယူ. လေ ၀ င်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်တွင်လေအလျင်ကိုထိန်းညှိရန်ထိန်းချုပ်သောအဆို့ရှင်များတပ်ဆင်ထားသည်.
ဂီယာအစိတ်အပိုင်းကိုငါးအစာတောင့်အခြောက်ခံစက်အဆုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသည်. ဂီယာလျှော့စက်၏အနေအထားကိုညှိခြင်းဖြင့်ဂီယာကွင်းဆက်၏တင်းကျပ်မှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်. ဂီယာ reducer ၏အခြားဘက်ခြမ်းရှိဂီယာများကိုလည်းသက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန်အတွက်ချောဆီကိုထိုးပေးလိမ့်မည်.
ဇFeed Pellet Dryer Machine အလုပ်ကိုလုပ်သည်?
ဤခါးပတ်အစာတောင့်ခြောက်သွေ့စက်ကိုလွတ်လပ်သောယူနစ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပန်ကာပါဝင်ပါသည်, အပူ device ကို, သီးခြားသို့မဟုတ်ဘုံလတ်ဆတ်သောလေထုစုတ်ယူခြင်းစနစ်နှင့်အိပ်ဇောစနစ်. တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်များ၏ operating parameter သည်လွတ်လပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့် optimized စစ်ဆင်ရေးသေချာ.
အစာကျွေးသောတောင့်သည်ဖိအားပေးစက်၏အပေါ်ဆုံးအလွှာတွင်ညီမျှသည်, သောသံမဏိဝါယာကြိုးကွက်သို့မဟုတ်ဖောက်ထားပန်းကန်ဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်. လုံးလေးများသည် Belt conveyor နှင့်အတူရွေ့လျားပြီးအောက်ခြေအလွှာတွင်တဖြည်းဖြည်းကျသည်. ပူသောလေသည်တောင့်များကို ဖြတ်၍ အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ထုတ်ပေးသည်. နောက်ဆုံး၌လုံးလေးများသည်ထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့်ထွက်သွားသည်.
Feed Pellet Dryer Machine ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ